Mamoaka torohevitra momba ny dia ho an'i Venezoelà ny FAA
Home » Vaovao momba ny fiaramanidina » Mamoaka torohevitra momba ny dia ho an'i Venezoelà ny FAA
Etazonia Federal Administration Aviation (FAA) dia namoaka mpanolotsaina momba ny dia ho an'ny faritany sy ny habakabaka ao Venezoela noho ny fitomboan'ny tsy fandriam-pahalemana sy ny fifanenjanana ara-politika ao Venezoela sy ny mety ho vokany loza mety hitranga amin'ny hetsika fiaramanidina.
Ity fampandrenesana ity dia mihatra amin'ny mpitatitra rivotra rehetra any Etazonia sy mpandraharaha ara-barotra. Ny Notam dia tsy mandrara olona tsy hanao hetsika sidina any Venezoela raha toa ka nahazo alàlana avy amin'ny masoivoho hafa an'ny governemanta amerikana na miaraka amin'ny fankatoavan'ny FAA ny hetsika.
Ireo olona ao amin'ny habakabak'i Venezoela nanomboka tamin'ny andron'ity Notam ity dia manana 48 ora hamaritana raha azo atao soa aman-tsara ny asany. Raha misy vonjy maika izay mitaky fanapahan-kevitra sy fandraisana andraikitra eo noho eo ho fiarovana ny sidina, dia mety mihataka amin'ity Notam ity ny mpanamory fiaramanidina amin'ny habakabaka takian'io vonjy maika io.
Vao avy nifindra tany Hawaii ny mpanamory fiaramanidina helikoptera nianjera tamin'ny helikoptera
Salt Lake hampiantrano ireo matihanina izay mamandrika fivoriana sy fivoriambe an'arivony